Vohay ny karatra SD voaro voaaro | Fikolokoloana biolo
1 Ahoana ny fomba hamohana ny karatra Micro SD voaaro amin'ny Windows
1.1 Amin'ny alàlan'ny Lock / Unlock Switch
1.2 Amin'ny alàlan'ny Windows Registry
1.3 Mampiasa ny fitaovana Diskpart
1.4 Mampiasa File Explorer
1.5 Mampiasa ny fitaovana HDD LLF Low Level Format
2 Fomba hamahana ny karatra micro SD voaaro amin'ny Mac OS
2.1 Fampiharana kapila fampiasana
3 Fomba hafa hamahana ny karatra micro SD voaaro amin'ny finday avo lenta sy tablette
3.1 Fitaovana IOS / iPadOS
3.2 Fitaovana Android
Betsaka ny olona amin'izao fotoana izao no manana olana amin'ny fanaovana kopia sy famindrana rakitra karatra micro SD. Izany dia vokatry ny fiarovana an-tsoratra ananan'ireto fitaovana elektronika ireto. Marihina fa ity fiarovana an-tsoratra ity dia fitaovam-piarovana izay mampiasa ity kara-kara ity, na ara-batana na saika, mba hisorohana ny fampidirana vaovao vaovao na fanovana amin'ny karatra voalaza.
Noho izany, etsy ambany, hanazava ny fomba hafa isafidianana Ahoana ny fomba famohana karatra micro SD Voaro arovana amin'ny Windows sy Mac OS mba hahafahanao manohana sy mankafy ny mombamomba anao isaky ny mila anao izany.
Ahoana ny fomba hamohana ny karatra Micro SD voaaro amin'ny Windows
Tsy misy isalasalana, ny safidy ananantsika mamoha karatra micro SD arovan'ny fanoratana amin'ny alàlan'ny rafitra fiasa Windows. Manaraka izany, hotononinay sy hazavainay ireo efa be mpampiasa indrindra. Ireo dia:
Amin'ny alàlan'ny Lock / Unlock Switch
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny famohana karatra SD voaro voaaro dia ampy hanalana ny mekanika fanidiana ara-batana ao amin'ny karatra fitadidiana.
Tsara ny manamarika fa ny ankamaroan'ny karatra fahatsiarovana microSD manana switch kely eo amin'ny ilany havia voamarika amin'ny teny hidin-trano izy ireo. Midika izany fa raha mifandray amin'ny làlan-kaleha izy dia hamela anao hamela ny fiarovana ny soratra amin'ny karatra.
Na izany aza, ny zava-misy fa ny switch switch dia apetraka amin'ny sisin'ny fitaovana dia mety matetika mandray anjara amin'ny sakana amin'ny fanoratana angon-drakitra azo avela tsy nahy. Mba hamahana, noho izany, dia ampy ny mamindra ny jiro amin'ny làlana mifanohitra amin'izany.
Amin'ny alàlan'ny Windows Registry
Raha tsy misy switch ny karatra fitadidiana ary mbola tsy azonao ampiasaina tsara dia azonao atao ny manandrana mampiasa ny Windows 'fisoratana anarana. Izay hampiato ny fiarovana ny fanoratana avy any. Manaraka izany, holazainay ny fomba fanaovana azy. Avy eo:
Voalohany indrindra, ampifandraiso amin'ny solosaina ny karatra micro SD. Hatao izany amin'ny fampidirana azy ao amin'ny mpamaky sahaza azy.
Mandrosoa indray izao ny rezistra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny fitambaran'ny bokotra Windows + R amin'ny kitendry PC, hanokatra "Run".
Aorian'izay, eo am-baravarankely izay hitanao hita eo amin'ny birao, soraty ny baiko "regedit".
Avy eo tsindrio ny bokotra "manaiky”Ary miditra amin'ny rejisitra.
Ao amin'ny varavarankely vaovao izay haseho anao, ampiasao ireo lahatahiry hita eo amin'ny sisiny ankavia hankanesana amin'ny lalana HKEY_LOCAL_MACHINE> SYSTEM> CurrentControlSet> Control> StorageDevicePolicies.
Tsindrio indroa izao ny bokotra WritingProtect ary kitiho ny 0 amin'ny saha "Data data" ary kitiho ny bokotra "OK".
Raha tsy hitanao ny folder "StorageDevicePolicies", Azonao atao ny mamorona azy amin'ny fipihana tsara ny folder" Control "mifantina amin'ny menio misokatra, ireo singa" Vaovao> Password ".
Tokony hamorona ny lakilen'ny "WriteProtect”. Aorian'izay, tsindrio havanana amin'ny folder "StorageDevicePolicies"Ary safidio ny safidy avy amin'ny menio izay miseho"Vaovao> sanda DWORD (32 bit)".
Ary farany, avereno indray ny solosainao ary andramo indray ny manoratra angona amin'ny karatra micro SD-nao.
Mampiasa ny fitaovana Diskpart
Alternative hafa mahomby hanalana ny karatra micro SD arovanao amin'ny Windows ao amin'ny Windows dia ny fitaovana "Diskpart". Izy io dia mifanaraka amin'ny fitaovana fizarazarana mahasoa natsofoka tao amin'ny Windows, izay azo ampiasaina amin'ny tsipika baiko. Manaraka izany, holazainay ny dingana tokony harahina hanalana ny karatra micro SD arovanao amin'ny fanoratana amin'ny alàlan'ity fitaovana ity. Avy eo:
Voalohany, ampidiro ao amin'ny mpamaky ny solosaina ny karatra micro SD.
Avy eo tsindrio ny bokotra Start (ilay misy ny sary famantarana Windows) izay eo ankavanan'ny zana-tohatra.
Sokafy izao "Diba ny baiko”Miaraka amin'ny tombony amin'ny fitantanana. Noho izany, tokony hanoratra ianao "cmd”Ao amin'ny sahan'ny fikarohana. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy tsindrio havanana ny valiny mifanaraka amin'izany ary safidio ilay singa "Mihazakazaha toy ny mpandrindra" avy amin'ny menio misokatra. Rehefa avy nanatanteraka tsara ireo dingana teo aloha ianao dia tsindrio ny bokotra "Eny".
Ary eo am-baravarankelin'ny "Diba ny baiko"Amin'ny birao, alefaho ireto baiko manaraka ireto amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra".Intro”Amin'ny kitendry PC. Avy eo:
Diskpart: Hanombohana ny fampiasana Diskpart.
Lisitry ny kapila: Mba tanisaina ireo kapila misy amin'ny solosaina ary tadiavo ny karatra micro SD izay hamerina ny fahazoan-dàlana rehetra.
Misafidiana kapila x: Misafidy ny kapila mifandraika amin'ny karatra micro SD izay tianao hihetsika. Aza adino fa tsy "X" dia tsy maintsy soratana ny isa mifandraika amin'ny karatra micro SD.
Mazava ho azy fa hamaky mazava tsara ny disk: Mba hamafana ireo toetra tsy vakiana amin'ny karatra fahatsiarovana fotsiny.
output: Fivoahana ny Diskpart.
Ary farany, ny karatrao micro SD dia mila sokafana ary noho izany dia azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny famakiana sy fanoratana.
Mampiasa File Explorer
Amin'ity tranga ity, raha afaka mampiasa ny karatra micro SD tsy misy olana dia ilaina ny mamolavola azy. Azo tanterahina io Windows sy Mac OS io. Na izany aza, raha tsy hoe namorona backup ianao ho fepetra fisorohana dia tsy maintsy ihodinanao ny fahaverezan'ny data amin'ny kapila. Avy eo, hasehonay anao ny fomba hamaha ny karatra micro SD anao amin'ny alàlan'ny famolavolana azy amin'ny File Explorer. Avy eo:
Sokafy aloha ny mpikaroka rakitra amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kisary "Folder mavo”. Izay hisy eo amin'ny Taskbar.
Ampifandraiso amin'ny karatra mpamaky karatrao izao ny karatra micro SD.
Avy eo, safidio ilay zavatra “eo am-baravarankely izay niseho teo amin'ny birao.Ity PC ity”Na“ Ity ekipa ity ”avy eo amin'ny sisiny ankavia.
Aorian'izay, tsindrio havanana amin'ilay singa "kisary Micro SD" mba hamolavolana azy ary, avy amin'ny menio miseho dia safidio ilay entana "endrika".
Rehefa vita ny dingana teo aloha dia miroso amin'ny fikandrana fanampiny izay misokatra, safidio "FAT32"Na" exFAT "avy amin'ny menio mitete-midina hisafidianana ny rafitry ny rakitra.
Farany, soraty ny anarana tianao homena ny fitaovana ao amin'ny saha "Volume label" ary kitiho ny bokotra "fanombohana"Y"manaiky”Hanombohana ny fomba.
Mampiasa ny fitaovana HDD LLF Low Level Format
Raha te hamaha ny karatra micro SD arovanao ao amin'ny Windows dia azonao atao ny mamolavola ny karatra micro SD ampiasainao amin'ny fitaovana HDD LLF Low Level Format.
Ity dia rindrambaiko maimaimpoana ho an'ny rafitra miasa Microsoft rehetra. Ho fanampin'izany, dia tokony homarihina fa mamela ny hiditra an-tsehatra karatra SD micro, fahatsiarovana USB ary kapila mafy rehefa manatanteraka endrika ambany amin'ny singa. Izany hoe, hamafana ny fitadidiana rehetra amin'ny fomba farany sy tanteraka. Manaraka izany, holazainay ny dingana rehetra hatao mba hiantohana ny famohana ny karatra micro SD arovanao amin'ny fanoratana. Avy eo:
Voalohany indrindra hiroso amin'ny fampidinana azy io raha hanao izany, mifandray amin'ny tranokalany ary kitiho ny rohy "Download Windows Executable: HDD Low Level Format Tool ver.xx". Izay ho hita eo amin'ny farany ambany amin'ny pejy ary toy ny angona manokana dia miasa tsy misy fametrahana.
Rehefa vita ny fisintomana dia sokafy ny “.exe file".
Ankehitriny, eo am-baravarankely izay miseho eo amin'ny birao, tsindrio ny bokotra "Eny, manaiky aho" ary avy eo amin'ny "Tohizo maimaim-poana".
Safidio ny karatra micro SD handrafetana amin'ny lisitra ary kitiho ny bokotra "hanohy".
Ary farany, mandehana any amin'ny kiheba "Low level format" ary kitiho ny "Ampidiro ity fitaovana ity”Hanombohana ny famolavolana ny kapila.
Fomba hamahana ny karatra micro SD voaaro amin'ny Mac OS
Raha, etsy ankilany, ianao dia mampiasa a Solosaina Mac OS, azonao atao ny manao endrika ambaratonga ambany amin'ny karatra fahatsiarovana. Ity fomba fiasa ity dia mitovy amin'ilay hita tamin'ny dingana teo aloha ho an'ny kinova Windows, mampiasa Disk Utility. Aza adino fa ny fampiharana dia efa tafiditra ao amin'ny solosaina Mac rehetra ho an'ny fitantanana fizarazaran-tany. Avy eo:
Fampiharana kapila fampiasana
Raha hampiasa azy io dia atombohy amin'ny fikitihana ny kisary (ilay misy kapila mafy) misy ao amin'ilay fampirimana “more”Avy amin'ny Launchpad.
Avy eo, eo am-baravarankely izay hitanao izao eo amin'ny efijery, safidio ny anaran'ny karatra micro micro voaaro.
Azonao atao ny manindry ny bokotra famerenana / format, izay ho hita eo an-tampony.
Aorian'izay, ao amin'ny fikandrana fanampiny izay hisokatra, tsindrio ny bokotra voatondro ho "Safidy fiarovana".
Manohiza mametraka ny bara fanitsiana kapila amin'ny toerana fahatelo na fahefatra. Amin'ity fomba ity dia hahafahanao manao fanoratana telo na efatra amin'ny data.
Vantany vao vita ny dingana teo aloha dia miroso amin'ny fanindriana ny bokotra "Ekeo".
Ary farany, safidio ny anarana hatolotra ny karatra fahatsiarovana sy ny rafitry ny rakitra. Ho an'ity dia azonao atao ny mampiasa ny menus mifanaraka aminy "anarana"Y"endrika".
Atombohy izao ny fizotry ny fandaminana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra "Ampodio".
Fomba hafa hamahana ny karatra micro SD voaaro amin'ny finday avo lenta sy tablette
Manaraka izany, holazainay ny mety isan-karazany misy hamaha ny karatra micro SD arovan'ny fanoratra amin'ny finday avo lenta sy Tablets. Avy eo:
Fitaovana IOS / iPadOS
Ny rafitra fiasan'ireto fitaovana elektronika ireto dia tsy mamela ny famohana karatra micro SD amin'ny alàlan'ny fandefasana endrika mivantana toy ny amin'ny rafitra fikirakirana hafa. Amin'ireto tranga ireto dia tsy maintsy misintona fampiharana tsy ofisialy avy amin'ny tamba-jotra ianao mba hahafahana manatanteraka ny famohana. Na izany aza, tsy ampirisihina hanao izany satria mety hanimba ny fitaovana elektronika ny fomba fanao toy izany.
Raha manana finday finday Android na takelaka ianao dia azonao atao ny mamoha karatra SD voaaro amin'ny fanoratana amin'ny alàlan'ny famolavolana azy mivantana avy amin'ny menan'ny rafitra fandidiana. Izany dia hoe, raha te-hamolavola ny karatra SD micro Android, dia mila manaraka ireo dingana etsy ambany ianao. Avy eo:
Ilainao aloha ny mampiditra ny karatra micro SD ao anaty toerana mety. Matetika dia hita eo amin'ny sisiny na amin'ny ambony ny fitaovana.
Avy eo dia tsy maintsy mandray ilay fitaovana ianao, mamoha azy ary miditra amin'ny trano. Aza adino fa ny trano dia ny efijery misy ny sary famantarana ny fampiharana rehetra.
Safidio izao ny kisary "Fikirakira" (ilay misy ny mariky ny kitapo).
Aorian'izay, safidio eo amin'ny efijery azo ampiasaina ilay singa fantatra amin'ny hoe "Fahatsiarovana sy fisie".
Safidio amin'ny farany ny singa "Format" ary avy eo ny bokotra "Delete sy format". Amin'ity fotoana ity dia hahita fanamarihana eo amin'ny efijery ianao hampahafantatra anao ny fahavitan'ny fomba fiasa.
Raha mampiditra ny karatra micro SD ao amin'ny finday avo lenta na ny takelaka voalohany ianao dia azonao atao ny mamolavola azy io ary misafidy na hametraka azy ho toy ny fiara fitadidiana voalohany na faharoa. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mikasika ny fampandrenesana mifanentana amin'ny alàlan'ny default ianao no miseho eo amin'ny efijery.
Ho famaranana, antenainay fa ireo fampahalalana rehetra ireo dia mifandraika amin'ny fomba hafa isafidianana Ahoana ny fomba famohana karatra micro SD arovan'ny fanoratana, afaka manampy betsaka anao izy io. Raha tianao koa ity lahatsoratra ity, dia ampirisihinay hiditra ny rohy manaraka izay hahitanao ireo fampahalalana isan-karazany mety hahaliana anao.
Previous: Previous post: Sintomy maimaimpoana ny Skype
Next: Next post: Ahoana ny fomba handaminana TP-LINK Extender